Muxuu ka yiri Zinedine Zidane guushii ay ka gaareen kulankii adkaa ee Madrid Derby? – Gool FM
(Madrid) 01 Feb 2020. Macalinka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa faallo ka bixiyay guushii ay ka gaareen kulankii Madrid Derby ay maanta kula ciyaareen, kooxda Atletico Madrid garoonka Santiago Bernabeu.
Real Madrid ayaa guul dirqi ah kaga gaartay kooxda Atletico Madrid garoonka Santiago Bernabeu, kaddib markii ay kaga adkaatay 1-0, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Zinedine Zidane ayaa ciyaarta kaddib ka soo muuqday saxaafada waxaana ugu horeyntii wax laga weydiiyay rigooradii laga diiday Atletico Madrid kaddib qaladqii lagu galay Álvaro Morata wuxuuna ku jawaab celiyay:
“Ma aanan arkin rigoorada, mana doonayo inaan faragaliyo arrimahan, garsooraha ayaana sheegay inaysan jirin waxba”.
Intaas kaddib Zidane ayaa wax laga weydiiyay waxa uu u sheegay ciyaartoydiisa inta u dhaxeysay labada qeybood ee ciyaarta wuxuuna ku jawaab celiyay:
“Ma kashifi doono siraha qolka labiska, wixii halkaas ka dhacayna ma idin sheegi doono, waxaan ku qasbaneyn inaan qabano shaqo gaar ah qeybta labaad ee ciyaarta”.
“Waxaan soo fiicnaanay qeybta labaad ee ciyaarta, waxaana u baahneyn inaan bedelno natiijada dheesha waana ku guuleysanay taas”.
Tababare Jurgen Klopp oo ka hadlay guushii ay ka gaareen kooxda Southampton